Sheekada filimka Jai Lava Kusa: inaba caadi ma ahan mada daalo ahaan Jr. NTR filimka uu la yimid | Filimside.net
Home » Sheekada Filimada » Sheekada filimka Jai Lava Kusa: inaba caadi ma ahan mada daalo ahaan Jr. NTR filimka uu la yimid
Sheekada filimka Jai Lava Kusa: inaba caadi ma ahan mada daalo ahaan Jr. NTR filimka uu la yimid
Taariikhda: September 21, 2017
Super Star Jr. NTR filimkiisa Jai Lava Kusa waxaa lagu tilmaami karaa mashruuca labaad ee ugu weyn sanadkaan la imaadaan Tollywood kadib filimka Baahubali 2 waana filim hadal heyntiisa cirka mareyso.
Jilaayaasha filimkaan: Jr NTR, Nivedha Thomas, Raashi Khanna, Ronit Roy and Nanditha Raj
Sheekada Filimka Jai Lava Kusa: Jai, Lava iyo Kusa (Jr. NTR) waa sedex walaalo ah oo halmar wada dhasheen sidoo kalena kasoo jeedaan qoys shirkado iska leh.
Sedexdii walaalaha ahaa ayagoo aad u yar ayay kala lumayaan mid walbana noloshiisa gaarka ah ayuu la daala dhacayaa ayagoon war isku heynin.
Jai labada kale ee walaalihiisa ah Lava iyo Kusa markii ay yaraayeen ayuu necbaa wuxuuna noqonaa gaangester weyn oo laga dambeeyo kana taliyo tuulada Berhampur.
Dhinaca kale Lava wuxuu ku bar baaraa nolol dagan sidoo kalena wuxuu ka shaqeeyaa bangi waana shaqsi daacad qalbi nadiif ah leh.
Midka sedexaad Kusa nolol wasaqeesan ayuu kusoo koray waana tuug xariif ah oo dadka caqli caqli ku baado wax kalena aan ka fikirin noloshana la sahlan.
Mudo 18-sano kadib ayay Lava iyo Kusa wada kulmayaan si lama filaan ah, Lava ayaa rabo inuu ka faa’iideesto isku ekaan shaha asiga iyo Kusa si uu dhib uu ku jiro kaga baxsado.
Laakiin Lava iyo Kusa waxay gacanta u galayaan ninka aan nixin ee tuulada Berhampur ka taliyo Jai kaasi oo waligiis necbaa labada walaalihiisa ah!
Kadib sedexda walaalaha ah siyaasad, aar gudasho, xifaaltan iyo naceeb ayaa dhex maraayo waana inta dambe ee filimkaan loo daawan doono.
Bandhiga Jilaayaasha Filimkaan: Inaba caadi ma ahan NTR sida uu u matalay sedexda door ee kala duwan weliba waa arin dhib badan xiligaan casriga ah in jilaa sedex door matalo door walbana 100% u cadaalad falo, kaliya NTR ayaa sidaas sameyn karo.
NTR filimkaan wuxuu ku muujiyay inuu wax walbo matali karo waana hubaal Jai Lava Kusa uu safka hore kasoo gali doonto aflaanta uu ugu bandhiga wanaagsan yahay taariikh ahaan.
Maba la kala dooran karo NTR sedexdiisa waji ee kala duwan midka wanaagsan!
Labada atirisho Raashi Khanna iyo Nivetha Thomas bandhig fiican ayay la imaadeen laakiin waqti ahaan doorarkooda ma dheero waana filim NTR gacanta ugu jiro.
Ronit Roy ruug cadaaga TV-yada iyo Bollywood-ka caan ka ah markii ugu horeesay ayuu Tollywood filim ah kasoo muuqday balse doorkiisa xumaanta ah ma ahan mid adag wuuna iska wanaagsan yahay.
Sai Kumar isagana door wacan ayaa filimkaan laga siiyay wuxuuna ka mid yahay shaqsiyaadka filimkaan loo daawanayo.
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka Jai Lava Kusa:
Bandhiga sedexda waji ee NTR gaar ahaan doorka Jai
Action-ka, dareenka iyo walaatinimada qiirada badan
Mada daalo dhameestira dhan walbo
Hadalada lagu hadlaayo gaar ahaan hadalada NTR oo loo wada sacbin doono
Muxuu Ku Liitaa Filimka Jai Lava Kusa:
Qaabka sheekada loo dhigay o iska sahlan
Jilaayaasha kale filimkana oo door adag la siinin
Muusigada filimkaan oo aan ahayn mid hirgashay kaliya heesta Tring Tring ayaa ugu wanaagsan
Gunaanad: Director Bobby wuu nasiib badan yahay fariin sahlan ayuu doortay laakiin wuxuu siweyn u tayeeyay doorka sedexda waji ee NTR waana waxa ugu weyn ee filimkaan loo daawan doono looguna raaxeesan karo dhan walbo.
Mada daalada Ja Lava Kusa waa mid wacan inkastoo sheekada mid adag ahayn hadana dareenka walaaltinimo, qayaanada lama filaanka ah iyo Action-ka heerka sare ayaa wax walbo ku hilmaan siinayo.
Dhanka Boxoffice NTR bandhigiisa Classic ah hadal heynta filimkaan mada daaladiisa wacan waxay xaqiijin doontaa todobaadka kowaad inuu ganacsi adag sameeyo, laakiin darajada Hit dhameestiran inuu gaari karo lama hubo madaaama uu tiyaatarada ku qasban doono Suldaan Mahesh Babu filimkiisa Spyder oo todobaadka dambe tiyaatarada la wareegi doono.
Dadka filimada ka faaloodaan cel celis ahaan filimka Jai Lava Kusa waxay siiyeen 3/5 taasi oo muujineyso inuu yahay filim mada daalo wacan leh si wanaagsana loo daawan karo
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Jai Lava Kusa:
Waxaa Aqrisay 978